> Resource> Naghachi> Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ MMC Files na 3 Nzọụkwụ
Olee otú Naghachi MMC Files
Were ya na ị nwere MMC kaadị na e nwere ọtụtụ ịrịba photos na ya. Otu ụbọchị, ị chọta foto niile na-efu gị MMC kaadị, n'ihi na i hie ụzọ ehichapụ ha ma ọ bụ n'ihi formatting. Unu ga-adị nnọọ onwe iji nweta ha azụ ma na ị nwere enweghị echiche otú.
Nke bụ eziokwu bụ, ị ka pụrụ undelete MMC faịlụ ọ bụrụ na ị na-eji kaadị MMC ebe i furu efu ndị photos. Niile ị chọrọ bụ Wondershare Photo Recovery (dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP) na Wondershare Photo Recovery for Mac, ihe ịrịba omume na-enyere gị iji naghachi a dịgasị iche iche nke faịlụ dị ka photos, videos na music si gị MMC kaadị. Nke a na usoro-enye gị ohere ka ịhụchalụ hụrụ faịlụ nke mere na ị nwere ike ịlele ma ha bụ ndị ihe ị chọrọ iji naghachi ma ọ bụ.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery mbụ, na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike igosi na MMC data mgbake na ụfọdụ clicks.
Igosi MMC Photo Recovery na dị nnọọ 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Lee, anyị na-agbalị Wondershare Photo Recovery maka Windows. N'ihi na Mac ọrụ, biko ibudata Mac version
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị MMC kaadị na kọmputa na ẹkedori usoro ihe omume. Ị ga-ahụ a window dị ka n'okpuru ngosipụta. Pịa "Malite" na-amalite mgbake.
Cheta na: Biko n'aka na gị MMC kaadị nwere ike ghọtara site Wondershare Photo Recovery. Nzọụkwụ 2 Lee nnọọ na ị kwesịrị họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị MMC kaadị na pịa "iṅomi" na-iṅomi gị MMC kaadị.
Nzọụkwụ 2 Lee nnọọ na ị kwesịrị họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị MMC kaadị na pịa "iṅomi" na-iṅomi gị MMC kaadị.
Rịba ama: Ị nwere ike nụchaa na scanned N'ihi site na-ahọpụta edemede ke "iyo Nhọrọ".
Nzọụkwụ 3 Mgbe iṅomi okokụre, ị nwere ike ihuchalu hụrụ foto ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ike naghachi ha ka ị chọrọ. Họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha ka gị na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ.
Rịba ama: Anyị ukwuu atụ aro ka ị na-adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ ka MMC kaadị n'oge mgbake, biko họrọ ọzọ ebe na-azọpụta ha.
Key Akụkụ nke MMC Data Recovery
1 Na Wondershare Photo Recovery, ị nwere ike naghachi MMC faịlụ furu efu ruru dị iche iche a na ihe mere, gụnyere: formatted MMC kaadị, mberede nhichapụ, usoro njehie na ọbụna virus agha.
2 N'ihi na ihe ịga nke ọma mgbake, biko adịghị eji gị MMC kaadị ọ bụla ọzọ mgbe ị na-ahụ na ị na faịlụ na ya na-efu. New data nwere ike mfe naghachi ebe ehichapụ faịlụ eji ogide.
Ọ bụrụ na Wondershare Photo Recovery adịghị chọta ụdị faịlụ ị chọrọ iji naghachi, ị nwekwara ike gbalịa Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, ọ na-akwado mgbake nke ọzọ faịlụ.
2 Nzọụkwụ naghachi ehichapụ ma ọ bụ Lost faịlụ site iPhone 6 Plus / 6/5 / 5S / 5C / 4S